Exit-Intent पप-अपहरूको उदाहरणहरू जसले तपाईंको रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्नेछ | Martech Zone
Exit-Intent पप-अपहरूको उदाहरणहरू जसले तपाईंको रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्नेछ
सोमवार, जुलाई 20, 2020 बुधबार, मार्च 30, 2022 उग्लजेसा जुरिक
यदि तपाईं व्यापार चलाउनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा छ रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्ने नयाँ र अधिक प्रभावकारी तरिकाहरू प्रकट गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मध्ये एक हो।
हुनसक्छ तपाईंले पहिले देख्नुहुने छैन, तर एक्जिट-इन्टेंट पप-अपहरू तपाईंले खोजिरहनु भएको सही समाधान हुनसक्दछ।
किन यस्तो छ र तपाइँ तपाइँको अग्रिममा तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ? तपाईले एक सेकेन्डमा थाहा पाउनुहुनेछ।
एक्जिट-इन्टेन्ट पप-अपहरू के हुन्?
त्यहाँ पप-अप विन्डोजहरूका धेरै फरक प्रकारहरू छन्, तर यी केहि प्रयोग हुनेहरू:
पप-अप क्लिक गर्नुहोस्
पप-अप स्क्रोल गर्नुहोस्
समय सकिएको पप-अप
निकास ईन्टेन्ट पप-अप
तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको आफ्नै फाइदाहरू छन्, तर अब हामी व्याख्या गर्नेछौं किन बाहिर निस्कने-उद्देश्य पप-अपहरूले तपाईंको व्यवसायलाई उच्च सफलताको स्तरमा पुर्‍याउने साँच्चै ठूलो क्षमता राख्छन्।
निकास-आशय पप-अपहरू हुन्, नामले नै भनेको छ, विन्डोजहरू देखा पर्छन् जब एक आगन्तुक वेबसाइटबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ।
आगन्तुकले ब्राउजर ट्याब वा सञ्झ्याल बन्द गर्न बटनमा संकेत गर्नु अघि, बाहिर निस्कने पप-अप विन्डो देखिन्छ। यसले आगन्तुकको ध्यान खिच्ने र कारबाही गर्न प्रोत्साहित गर्ने एक अपरिहार्य प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ।
यी पप-अप प्रकार्यहरू स्मार्ट एक्जिट-इन्टन्ट टेक्नोलोजीमा आधारित हुन्छन् जसले निकास आशयलाई मान्यता दिन्छ र पप-अपलाई ट्रिगर गर्दछ।
र ती किन यति महत्त्वपूर्ण छन्?
तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तपाईंले तिनीहरूलाई अर्को सम्भावित खरीददार गुमाउनबाट रोक्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ!
केहि बहुमूल्य प्रस्तावहरू देखाउँदै, व्यक्तिहरूले उनीहरूको दिमाग परिवर्तन गर्न सुरू गर्न सक्दछन् र वास्तवमा तपाईंले सेट गर्नुभएको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दछन्।
चाहे त्यो प्रस्ताव केही रोचक समाचारहरूको बारेमा हो जुन उनीहरूले तपाइँको इमेल अभियान मार्फत प्राप्त गर्न सक्छन् वा तत्काल खरिदको लागि छुट, तपाइँ प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई यसलाई स्वीकार गर्न मनाउन सक्नुहुन्छ।
अवश्य पनि, त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन तपाईले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ:
नेत्रहीन अपील डिजाइन
चलाखीपूर्वक राखिएको प्रस्ताव
CTA सहित (कल-टु-एक्शन) बटन
यो सोच्न को लागी धेरै सामान जस्तो देखिन सक्छ, तर हामी तपाईंलाई केही उत्तम अभ्यासहरू देखाउँनेछौं जुन तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइट र सामान्य रूपमा तपाईंको व्यवसायको साथ अनुसरण गर्न र प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
इन्फोग्राफिक हेर्नुहोस्: बाहिर निस्कने उद्देश्य के हो?
एग्जिट-इन्टेंट पप-अपहरूको उत्तम अभ्यासहरू
एक्जिट-इन्टेंट पप-अप अभ्यासहरू राम्रोसँग बुझ्नको लागि, हामी तिनीहरूलाई विभिन्न सफल वेबसाइटहरूबाट उपयुक्त उदाहरणहरू प्रयोग गरेर कल्पना गर्नेछौं।
उदाहरण १: बहुमूल्य सामग्री प्रस्ताव गर्नुहोस्
सामग्रीको मूल्यवान टुक्राहरूको प्रस्ताव राख्नु राम्रो विचार हो। जब तपाइँ तपाइँको लक्षित समूह चिन्नुहुन्छ, तपाइँ सामग्री तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन उनीहरूका लागि चाखलाग्दो छ।
यी हुन सक्छ:
तपाईंले आफ्नो उत्पादन वा सेवाका खरिदकर्ताहरूमा रूपान्तरण गर्न चाहनुहुने व्यक्तिहरूको रुचिबारे राम्ररी अनुसन्धान गरिसकेपछि तपाईंलाई अप्रतिरोध्य प्रस्ताव सिर्जना गर्न धेरै सजिलो हुनेछ।
बदलामा, तिनीहरू खुशीसाथ आफ्नो इमेल सम्पर्क छोड्नेछन् किनभने "मूल्य साँच्चै कम छ"।
तपाईंले सम्पर्कहरू स collect्कलन गर्नुभयो र तिनीहरूलाई तपाईंको मेलिंग सूचीमा थपे पछि, तपाईं ब्रान्ड जागरूकता फैलाउन सक्नुहुन्छ र तपाईंको भविष्यका ग्राहकहरूसँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुन्छ।
तर नबिर्सनुहोस् कि तपाईंले अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्छ, अन्यथा, तपाईंका सदस्यहरू निराश हुनेछन् र तिनीहरू फिर्ता आउने छैनन्।
उनीहरूलाई देखाउनुहोस् कि तपाईमाथि भरोसा राख्नु भनेको उचित थियो।
यहाँ बाट एक उदाहरण छ कोशेड्युल:
सन्दर्भ: कोशेड्युलले एक निकास पप-अप विन्डो सेट अप गर्दछ जहाँ आगन्तुकहरूले केहि मूल्यवान सामग्री स collect्कलन गर्न सक्दछन्। हामी देख्न सक्दछौं, उनीहरूले चलाखीपूर्वक यो पनि भने कि तिनीहरू दुबै क्यालेन्डर र ई-बुक प्रस्ताव गर्छन्, र तपाईंले केवल यसमा क्लिक गर्नुपर्दछ। अब यो प्राप्त गर्नुहोस् तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न बटन।
डिजाइन: साधारण डिजाइन, तर उज्यालो रंगको साथ जुन ध्यान आकर्षण गर्दछ। पाठको माथिका तस्वीरहरूले प्रमाण दिन्छ कि सामग्री उनीहरूको लागि प्रतीक्षा गर्दै छ, त्यो हो, तिनीहरूको कन्फर्मेसन।
कापी: प्रत्यक्ष संचारमा, तपाईं जानु अघि ... वास्तवमै उनीहरूलाई रोक्दछ र घुमाउँदछन् तिनीहरू वास्तवमै टाढा जानु भन्दा पहिले, र यो बुद्धिमानीपूर्वक यो एक्जिट-इन्टन्ट पप-अपमा प्रयोग हुन्छ।
प्रस्ताव: प्रस्ताव आमन्त्रित देखिन्छ। शब्दहरू सहित योजना र व्यवस्थित गर्नुहोस् राम्रो प्रस्तावना र समय प्रभावकारिताको साथ सम्पूर्ण प्रस्तावलाई सम्बद्ध गर्न सहयोग गर्दछ।
उदाहरण २: प्रत्यक्ष प्रदर्शन प्रदर्शन गर्नुहोस्
एक प्रदर्शन एक राम्रो तरीका हो तपाइँको आगन्तुकहरु को साथ संपर्क मा।
हुनसक्छ तपाईंको प्लेटफर्म एकदम जटिल देखिन्छ र यही कारणले आगन्तुक तपाईंको वेबसाइटबाट बाहिर निस्कन चाहन्छन्।
यदि तपाईं एक निश्चित सेवा प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ, के फाइदाहरू, र समान छन् भनेर धेरै सजीलो व्याख्या गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन एक राम्रो विकल्प हो किनभने सबै कुरा वास्तविक समयमा हुन्छ र सम्भावित खरीददारहरूले सबै अपडेट र समाचारहरू देख्न सक्छन्।
कसरी हेर्नुहोस् Zendesk यो तिनीहरूको निकास इन्टेंट पप-अप विन्डोमा प्रयोग भयो:
सन्दर्भ: Zendesk एक ग्राहक समर्थन टिकट सफ्टवेयर हो, यो पप अप एक राम्रो तरिका हो आफ्नो सम्भावित ग्राहकहरु संग संलग्न र संचार शुरू गर्न।
डिजाइन: मानवीय तत्व समावेश गरिएको छ, जसले मानिसहरूलाई तपाईंको व्यवसायसँग जडान गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रस्ताव: एक प्रदर्शन एक उत्कृष्ट प्रस्ताव हो किनभने यो प्लेटफर्मले एक समाधानको आश्वासन दिन्छ जुन तपाईंलाई अझ राम्रोसँग तपाईंको व्यवसाय चलाउन मद्दत गर्दछ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूको वाचा पूरा हुन थाल्छ क्षणमै, तपाईंले तुरून्त मद्दत प्राप्त गर्न थाल्नुहुन्छ।
कापी: यस प्रतिलिपिमा न्यानो-टोन छ जुन ग्राहकहरूसँग बलियो कनेक्शनको लागि महान छ। अर्को तर्फ, यदि तपाईंसँग केहि पृष्ठहरू छन् भने निर्माण अन्तर्गत, तपाइँ ग्राहकहरु र यो बाट नेतृत्व प्राप्त गर्न को लागी तिनीहरूलाई समाप्त गर्न प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन।
तपाईं पनि आफ्नो पपअपहरू राख्न सक्नुहुन्छ आउदैछ पृष्ठहरू र तपाईंको बिक्री फनेल ईन्धन सुरु गर्नुहोस्।
उदाहरण:: नि: शुल्क शिपिंग उल्लेख गर्नुहोस्
नि: शुल्क शिपिंग को लागी एक जादू वाक्यांश को लागी आवाज जो तपाइँ को लागी खरीद गर्न चाहान्छ।
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि मानिसहरूले कुनै पनि साइड लागतको लागि भुक्तान गर्न मन पराउँदैनन्। उनीहरूले शिपिंगका लागि अतिरिक्त पैसा तिर्नु भन्दा केही बढी तिर्ने पनि छन्।
यदि तपाईं शिपिंग लागत घटाउन सक्नुहुन्न भने, यसलाई आधारभूत मूल्यमा समावेश गर्नु राम्रो हो यसलाई तपाईंको स्टोरमा अलग राख्नु भन्दा।
जे होस्, यदि तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरुलाई नि: शुल्क शिपिंग प्रदान गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाइँले निश्चित गर्नु पर्छ। तपाइँको बिक्री धेरै छोटो समयमा बढ्न शुरू हुनेछ।
यहाँ बाट एक उदाहरण छ ब्रूकलिन:
सन्दर्भ: ब्रूकलिन शिटहरू बेच्ने कम्पनी हो, त्यसैले यो कुनै अनौंठो कुरा होइन कि हामी एक्जिट ईन्ट्यान्ट पप-अपमा सहजै बेड शिटहरू देख्न सक्छौं।
डिजाइन: सेतो पृष्ठभूमि, कालो फन्टहरू। तर के यो वास्तवमै त्यति सजिलो छ? पृष्ठभूमि तस्विरमा पानाहरू निश्चय नै उद्देश्यमा जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू यस्तो देखिन्छन् कि कोही आरामदायक ओछ्यानबाट उठेको छ। यो यस्तो छ कि उनीहरूले हामीलाई यी आरामदायक पानाहरू किन्न लोभ्याउन खोजिरहेका छन्, जुन निश्चित रूपमा लोभ्याउने छ, विशेष गरी यदि यदि तपाईंले पहिले नै यो पप-अप देखाएको बेला थकित महसुस गर्नुभयो भने।
प्रस्ताव: प्रस्ताव निश्चित रूपमा पर्याप्त स्पष्ट छ र यो अत्यधिक प्रभावी छ।
कापी: कुनै अनावश्यक शब्दहरू छैनन्, सफा र स्पष्ट प्रतिलिपि।
उदाहरण:: समाचार पत्रको लागि सदस्यता लिन मानिसहरूलाई कल गर्नुहोस्
एउटा न्यूजलेटर मूल्यवान सामग्रीको प्रकार हो, विशेष गरी यदि तपाईंले एक महान् बनाउनुहुन्छ जहाँ मानिसहरूलाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण चीजहरूको बारेमा जानकारी गराउन सकिन्छ र उनीहरूलाई तपाईंबाट केहि चीजहरू खरीद गर्न बाध्य पारिएको जस्तो लाग्दैन।
यसले तपाईंलाई तपाइँका ग्राहकहरूसँग जडित रहन अनुमति दिन्छ।
न्युजलेटर अभियानहरू चलाउनु भनेको यसको अर्थ तपाइँबाट तपाइँले नयाँ जानकारी कहिले अपेक्षा गर्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउनको लागि क्रमबद्ध हुनुपर्दछ।
यहाँ कसरी छ GQ मा यो लागू पप-अप विन्डो:
सन्दर्भ: GQ एक पुरुषहरूको म्यागजिन हो जसले जीवनशैली, फेशन, यात्रा, र अधिक कभर गर्दछ।
डिजाइन: फेरि, मानव तत्व सामेल छ। तस्विरमा रमाईलो हास्य र पप अपको बाँकी धेरै सरल छ, जसले उत्कृष्ट संयोजन गर्दछ।
प्रस्ताव: तिनीहरू सुझाव र युक्तिहरू प्रदान गर्दछन् जसले पुरुषहरूलाई उनीहरूको उत्कृष्ट देखाउन मद्दत गर्दछ, र उनीहरूले गर्नुपर्ने कुरा मात्र भनेको उनीहरूको सम्पर्क छोड्नु हो।
कापी: सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हाइलाइट गरिएको छ, त्यसैले आगन्तुकहरूलाई सब भन्दा ठूलो फन्टमा लेखिएको बाहेक केहि पढ्नु आवश्यक पर्दैन, किनकि यसले पर्याप्त जानकारी दिन्छ।
उदाहरण:: छुट प्रस्ताव गर्नुहोस्
छूट सधैं प्रोत्साहनजनक हुन्छ। जब तपाईं तिनीहरूलाई एक्जिट-इन्टन्ट पप-अपहरूमा थप्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईंको राजस्वमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्दछन्।
छूट कती उच्च हुनेछ, केवल तपाईं मा निर्भर गर्दछ। साना प्रोत्साहनहरूले पनि बिक्रीको संख्या बढाउन सक्दछन्।
केही स्टोरहरूले नियमित आधारमा छुट प्रस्ताव गर्दछन् किनकि यो वास्तवमै शक्तिशाली अभ्यास हो।
सबैभन्दा लोकप्रिय ई-वाणिज्य साइटहरूले पनि आगन्तुकहरूको ध्यान आकर्षित गर्ने तरिकाको रूपमा बाहिर निस्कने उद्देश्य छुटहरू प्रयोग गर्छन्। यहाँ एउटा साइटबाट एउटा उदाहरण हो जहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ अनलाइन लुगा किन्नुहोस्यदि तपाईंले तिनीहरूको इमेल मार्केटिङको लागि साइन अप गर्नुभयो भने प्रस्तावमा १५% छुट छ।
सन्दर्भ: रिभल्भको कपडा वेबसाइट हो जुन उत्पादनहरूको विशाल चयनको साथ छ, त्यसैले छुटको प्रस्तावले मानिसहरूलाई वास्तवमा पैसा बचत गर्ने मनसायले अझ बढी खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
डिजाइन: हामी देख्न सक्छौं कि मानव तत्त्व थप्ने काम पनि सामान्य अभ्यास हो। यस पप-अपसँग विवादास्पद सीटीए बटनको साथ एक उत्कृष्ट डिजाइन छ।
प्रस्ताव: उनीहरूले १०% छुट दिन्छ र तीन प्रस्ताव गरिएको कोटीहरू मध्ये एक छनौट गरेर केहि समय बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
कापी: प्रत्यक्ष ठेगाना ग्राहकको ध्यान आकर्षित गर्न एक शक्तिशाली तरीका हो।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने जस्तै, त्यहाँ कसरी विचारहरू छन् तपाई एक्जिट-इन्टन्ट पप-अपहरू आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ग्राहकहरूको साथ भरोसा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं डिजाईन, प्रतिलिपि, र विभिन्न प्रस्तावहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको आगन्तुकहरूको ध्यान लिनेछ र तपाईंको रूपान्तरण बढाउँदछ।
यस प्रकारको पप-अपले तपाईंको व्यवसायलाई के गर्न सक्दछ भन्ने तुलनाको तुलनामा निश्चित रूपमा यो सानो प्रयास हो।
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यसलाई प्रयोग गर्नु अझ सजिलो हुन सक्छ किनकि आज त्यहाँ त्यस्तो उपकरणहरू छन् जसले तपाईंलाई minutes मिनेट भन्दा कममा प्रभावकारी पप-अपहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् प्रिव्ही र यसका विकल्पहरू यसले तपाईंलाई आफ्नै वेबसाइट पपअपहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। ड्र्याग एण्ड ड्रप सम्पादक र अनुकूलन विकल्पहरूको साथ, आश्चर्यजनक पप-अप कार्यान्वयनको लागि तयार हुनेछ।
पप-अपहरू सिर्जना गर्ने बखत यी अभ्यासहरू प्रयोग गर्नुहोस् र कुन तपाईंको केसमा उत्तम रूपान्तरण गर्दछ हेर्नुहोस्!
टैग: कल-टु-एक्शनपपअप क्लिक गर्नुहोस्रूपान्तरण दरप्रविष्टि पप-अपप्रविष्टि पपअपनिकास आशयइरादा पप-अप निकाल्नुहोस्निकास ईन्टेन्ट पपअपपप-अप डिजाइनपप-अप प्रस्तावपपअपपपअप प्रस्तावस्क्रोल पप-अपस्क्रोल पपअपसमय सकिएको पप-अपसमय सकिएको पपअप
उगी सीईओ र संस्थापक हुन् सामग्री घोडा मार्केटिंग एजेन्सी जहाँ उसले B2B सास कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्दछ शक्तिशाली सामग्री मार्केटि strate रणनीतिहरूको साथ द्रुत गुगल रैंकिंग प्राप्त गर्न। उनी सास बढ्ने, बियर पिउने, आफ्ना २ दालमाटियन कुकुरहरू र सवारी घोडाहरूको साथ वरिपरि हिंड्ने उत्सुक छ।
वाक्यांश: एआईको साथ क्वान्टिफाई, उत्पन्न र अनुकूलन प्रतिलिपि
चिली पाइपर: इनबाउन्ड लीड रूपान्तरणको लागि एक स्वचालित अनुसूची अनुप्रयोग